Ogaden News Agency (ONA) – Shir maanta ugu soo gaba-gaboobay hawl-wadeenada jaaliyadaha Q. Yurub
Shir maanta ugu soo gaba-gaboobay hawl-wadeenada jaaliyadaha Q. Yurub
Posted by ONA Admin	/ February 17, 2013
Wuxuu maanta shir ugu soo gabagaboobey magaalada Helsinki ee caasimada dalkan hawl-wadeennada jaaliyada qaarada Yurub iyo masuuliyiin ka tirsan Haab. Shirka ayaa socday 16kii ilaa iyo 17kii bishan.
Masuulinyiinta HAAB ayaa maanta oo Axad ah waxay la shireen jaaliyada Soomaalida Ogadenia ee dalkan Finland, shirkaas oo ka dhacay xafiiska jaaliyadu ku leedahay magaalada Helsinki, halkaasoo ay jaaliyada ku siiseen warbixino qiimo badan oo gudo iyo dibadba leh.
Shirkan ay masuuliyiinta HAAB iyo jaaliyadda ay ku lahaayeen magaalada Helsinki ayaa waxaa dib loogu eegayey qaab-shaqeedka jaaliyadaha Yurub iyo adkaynta wadashaqaynta jaaliyadaha iyo siday isu kaashan lahaayeen cududda bulshadana loo midayn lahaa. Sidoo kale waxaa qiimayn lagu sameeyey hab shaqeedka jaaliyadaha qaarada yurub ka dhisan.
Shirka ayaa aayado qur’aan ah oo lagu furay kadib ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay Gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida Ogadenia ee dalkan Finland mudane Xasan Kamaal oo ka war bixiyey waxqabadka jaaliyadda kadib iyo mudane Colaad oo ah Hogaanka qorshaynta Haab oo warbixin dheer siiyey bulshadii meesha isugu timid. Waxaa sidoo kale madasha shirka ka hadlay xubno badan oo ka warbixino qiimo badan siiyey bulshada. Masuuliyiintan oo ka kala yimid qaarada Yurub ayaa dhamaantood ay ka warbixiyeen jaaliyadaha ay ka socdaan iyo siday u shaqeeyaan.
Shirkan ayaa dhamaan laysku raacay qodobadii meesha yaalay wuxuuna kusoo gabagaboobey jawi wanaagsan farxad iyo is afgarad.